क्रिसमस र नेपालमा यसको प्रभाव - IAUA
क्रिसमस र नेपालमा यसको प्रभाव
ramkrishna December 24, 2016	क्रिसमस र नेपालमा यसको प्रभाव
डिसेम्बर महिना सुरु हुनेबित्तिकै संसारमा क्रिसमसको माहौल सुरु हुने गर्दछ । कति मानिसहरुले क्रिसमसलाई बुझेर मान्ने गर्छन् भने कतिले रमाइलो गर्ने दिनका रुपमा लिने गर्दछन् । केही वर्षयता नेपालमा पनि यस उत्सवको प्रभाव पर्न थालेको छ । क्रिसमसको समयमा धेरै सपिङ महलहरुमा क्रिसमस ट्री सजावट हुनेगर्दछ । विभिन्न झिलिमिली बत्तिहरु बाल्ने गरेको पाइन्छ । अनि मानिसहरु विभिन्न डान्स क्लबमा जाने र रमाइलो गर्नेगरेको पाइन्छ ।
वास्तवमा क्रिसमस के हो ? अनि कहिलेदेखि संसारमा यो उत्सव मनाउन सुरु गरियो ? यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ । आज संसारमा भएका अर्बौं इसाईहरुले परमेश्वरले मानिसहरुलाई दिनुभएको असल उपहार अर्थात् उहाँको पुत्र येसु क्राइस्टको निम्ति क्रिसमस मनाउने गर्छन् । आजभन्दा २०१६ वर्ष अगाडि परमेश्वर मानिसको रुप लिएर अलौकिक तरिकाले संसारमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । अर्थात् येसु संसारमा मानव अवतार लिएर जन्मनुभएको थियो । बाइबलमा येसु क्राइस्टको जन्मको बारेमा यसरी लेखिएको छ :
“येसु ख्रिस्टको जन्म यसरी भयो, उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो तर उनीहरुको विवाह हुनुअघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्ववती भएको थाहा भयो । तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई सर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इक्छा गरे । तर जव उनले यी कुरा विचार गर्दैथिए सपनामा परमप्रभुका दूत देखापरे र उनलाई यसो भने “योसेफ, दाउदका छोरा, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ, उहाँ पवित्र आत्माद्वारा हुनुहुन्छ । तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाम येसु राख्ने छौ । किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरुलाई तिनीहरुका पापबाट बचाउनु हुनेछ ।” अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नुभएको वचन पूरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन् । “हेर कन्याले गर्वधारण गर्ने छिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाम इम्मानुएल राखिने छ । यसको अर्थ हो परमेश्वर हामीसँग ।” योसेफ निन्द्राबाट ब्युँझे र परमप्रभुका दूतले भने बमोजिम उनले मरियमलाई आफ्नी पत्नीका रुपमा स्वीकार गरे । मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेल योसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन् । योसेफले उहाको नाउँ येसु राखे ।” (बाइबल, मत्ती १ः१८–२५)
येसु क्राइस्टको जन्मलाई मानव इतिहासमा महत्वपूर्ण घटनाको रूपमा लिइन्छ । वास्तवमा यसलाई परमेश्वर मानव इतिहासमा प्रवेश गर्नुभएको दिनको रूपमा लिन सकिन्छ । येसु क्राइस्ट आजभन्दा करिब दुई हजार वर्ष अगाडि इस्राएल देशको बेथलेहेम भन्ने सहरमा जन्मनुभएको थियो । येसुले यस धर्तीमा जन्म लिनुभएको उद्देश्य संसारमा मानिसहरूले भोग्दैआएका सबैभन्दा ठूलो समस्या पापबाट बचाउनको निम्ति थियो । यही खुसीमा मानिसहरूले क्रिसमस मनाउने गर्छन् । येसु क्राइस्ट सारा संसारको मुक्तिदाता भएर जन्मनुभएको छ । यसले मानिसको जीवनमा खुसी र आनन्द ल्याएको छ । यही खुसी र आनन्दको सुसमचार सुन्ने र अरूलाई सुनाउने दिनको रूपमा क्रिसमस मनाउने गरिन्छ ।
डिसेम्बर २५, ३३६ इस्वी संवत्मा पहिलो पटक क्रिसमस मनाइएको घटना इतिहासमा पाइन्छ । जुन समयमा पहिलो क्रिस्चियन रोमी शासक कन्स्टानटाइनले शासन गरेका थिए । त्यसको केही वर्षपछि मण्डलीका पोप जुलियसले डिसेम्बर २५ लाई आधिकारिक रूपमा क्राइस्टको जन्मोत्सव मनाउने दिनका रूपमा प्रचलनमा ल्याएका थिए । हुन त डिसेम्बर २५ मा रोमीहरूले sataralia festivle (जुन धार्मिक चाड थियो) को रूपमा देशमा सार्वजनिक बिदा दिने गरेका थिए । विस्तारै त्यहाँका मानिसहरू येसु क्राइस्टमा विश्वास गर्न थालेको कारण क्रिसमस लोकप्रिय उत्सव बन्न थाल्यो । त्यस समयको मण्डलीले डिसेम्बर २५ लाई क्रिसमस उत्सव मान्नुको एउटा कारण सार्वजनक बिदा त छँदै थियो, दोस्रो धेरै जाडो र अँध्यारो भएका कारण येसु संसारको ज्योति हुनुहुन्छ भनी क्रिसमस मनाउन थालेका थिए । गोठालाहरूले आगो तापेको कारण येसु पनि जाडो महिनामा जन्मनुभएको हुन सक्छ भनी धेरै क्रिस्चियनले विश्वास गर्छन् । हाल डिसेम्बर २५ को दिनलाई संसारभरि नै क्रिसमसका रूपमा मनाउन थालिएको छ ।
क्रिसमसको समयमा येसु क्राइस्टको जन्मसम्बधी गीत गाएर मानिसले क्यारल मनाउने समेत गर्छन् । क्यारलको खास अर्थ आनन्द, हर्ष र खुसीको नाच हो । विश्वासीको घर–आँगनमा गई क्राइस्टको जन्मसम्बधी गीत गाउँदै क्यारल आयोजना गरिन्छ ।
क्रिसमस संसारका मानिसहरुको आफ्नै उत्सव हो । संसारका मानिसहरुलाई जगाउन, अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लम्कन सिकाउन, सही मार्ग देखाउन, वर्षमा एकपटक सबैबीच आउने महान उत्सव हो । यसैले क्रिसमस संसारभर अझ फैलँदै छ । संसारका मानिसहरुलाई उनीहरुले गरेका पापबाट क्षमा दिन, मानिसहरुलाई असल बन्न, प्रेम गर्नको निम्ति येसुले मानव अवतार लिएर यस धर्तीमा जन्मनुभएको थियो । उहाँको जन्म एकदम साधारण थियो अर्थात् एउटा गाईको गोठमा जन्मनुभएको थियो । आज यही येसु संसारमा भएका हरेक मानिसको हृदयमा जन्मन आवश्यक छ । हामीले आफूभित्रका खराबपनलाई त्याग्न र असलपनलाई स्वीकार गर्न सकिएको खण्डमो साँचो अर्थमा क्रिसमसको विश्वव्यापी सार्थकता पुष्टि हुनेछ । प्रभु येसुलाई आफ्नो हृदयमा राखेर क्रिसमस मनाइएको खण्डमा मात्र क्रिसमस वास्तविक हुनेछ ।
Previous Previous post: किन र कसरी देखिन्छ सपना ?
Next Next post: यस्ता छन् चार सपना हामी कहिले बिर्सदैनौं